» एमालेमा बस्ने कि एस पार्टीमा, जसपामा बस्ने कि लोसपामा ? भदौ २२ सम्म दल रोज्न पाइने !
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले हालै मात्र विभाजित नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई भदौ २२ गतेसम्म दल रोज्न पाउने समय दिएको छ ।
आयोगले एमाले र जसपाका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न भदौ २२ गतेसम्म समय दिएको हो ।
आयोगले एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा फुटेर बनेको लोकतान्त्रिक समाजवादीमा प्रवेश गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरुलाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशको प्रावधान अनुसार दल रोज्न पाउने सुविधा दिएको हो । अध्यादेशमा २१ दिनभित्र दल रोज्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले अध्यादेशअनुसार यही भदौ ९ गते दुवै दललाई मान्यता दिइसकेको छ । अब, नयाँ दलमा प्रवेश गर्न चाहने जनप्रतिनिधिहरुले भदौ १५ गतेदेखि २२ गतेसम्म सम्बन्धिन प्रदेश र जिल्लास्थित निर्वाचन कार्यालयमा गएर आफुले रोजेको दलमा बस्न पाउने जानकारी गराउन पाउने आयोगले जनाएको छ ।
उनीहरुले आफ्नो सक्कल नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रसहित सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर दल रोजेको सनाखत गर्नुपर्नेछ । यसैगरी प्रदेशसभा र स्थानीय तहबाट जारी भएको परिचयपत्र वा प्रमाणपत्र पनि सँगै लैजानुपर्नेछ ।